Genetic Information mety hanampy antsika hahatakatra Lifestyle mety ho aretina - News Fitsipika
Genetic Information mety hanampy antsika hahatakatra Lifestyle mety ho aretina
Genetic variants mialoha biolojika mety ho aretina, fa mety koa ho afaka ny hilaza aminay mikasika ny heritable fitondran-tena mety lafin-javatra
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Genetic fanazavana mety hanampy antsika hahatakatra ny fomba fiaina mahazaka ny aretina” dia nosoratan'i Suzi Gage, fa theguardian.com tamin'ny Alatsinainy 22 Febroary 2016 13.16 UTC
Rehefa mamaky lahatsoratra milaza fa misy fototarazo maromaro izay milaza mialoha ny aretina, matetika io vaovao io dia avy genome-sakany fikambanana fampianarana (GWAS). Ireo petra-kevitra-maimaim-poana mampiasa fandalinana maro ny olona, ary jereo ny fikambanana eo amin'ny aretina sy ny fototarazo fiovana maro ana hetsiny ny toerana manerana ny genome.
Fa satria fantatrareo fa misy 108 fototarazo toerana mifandray amin'ny aretin-tsaina dia tsy voatery hoe mahasoa raha tsy fantatrao izay fototarazo ireo raha ny marina variants manao. GWAS dia fitaovana fikarohana, ny fomba hanampiana antsika hahatakatra ny aretina. Indraindray dia ny fantatra fa ny Variant Laharana ho proteinina, ary avy eo ny asa ny izay Gene dia mora kokoa ny mahatakatra, fa amin'izao fotoana izao ny biolojika asany ny be dia be ny fikarohana ara-variants marina dia tsy mba mahalala, mametra ny fampiasana ny GWAS ho toy ny fitaovana fikarohana.
Misy ny mihevitra fa amantarana ny fototarazo variants GWAS maneho mivantana, anton-javatra mety ho niteraka ny aretina - ny "natiora" fa tsy "fanabeazana" faran'ny doza. Ny mpiara-miasa ka tsy ela akory izay namoaka taratasy in izay milaza fa mety hisy fanazavana fanampiny noho izay hita ao anatin'ny vokatra.
Raha misy GWAS ny homamiadan'ny havokavoka dia nitarika, Variant fototarazo iray izay mafy mifandray amin'ny homamiadan'ny havokavoka dia fantatra Variant miorina ao amin'ny faritra ny krômôzôma 15 antsoina hoe ny "nikôtinina acetylcholine fototarazo receptor sampahom-boaloboka". Variant ity naseho ho mifamatotra ny isan'ny sigara nifoka isan'andro, amin'ny olona izay mifoka sigara. Na dia mety ho ny raharaha fa ny tsy miankina ihany koa i Gene mampitombo ny mety ho voan'ny kanseran'ny havokavoka, ary koa ny alahelo ny fifohana sigara, dia toa azo inoana kokoa fa ity no antsoina Variant ao amin'ny GWAS ny homamiadan'ny havokavoka ny fifohana sigara, satria mahatonga ny homamiadan'ny havokavoka.
Misy ohatra tsara iray hafa ao amin'ny boky sy gazety toaka. Ny Variant fototarazo no fantatra fa mialoha ny fisotroana toaka. Izany Laharana ho proteinina izay mizara poizina metabolites ny toaka ho tsy misy poizina ireo. Raha toa ka tsy manana betsaka izany proteinina, tahan'ny ny poizina dia afaka hanangana, nahatonga anao hahatsapa marary sy menamenan'ny. Ny Variant dia tsy tena mahazatra amin'ny Eoropeana mponina, fa fahita kokoa amin'ny mponina ny Azia Atsinanana razambeny. Ao amin'ireo vondrona, GWAS ny tosidra ambony fantatra io toaka manokana mifandraika genotype. Saingy tsy hita ao amin'ny GWAS ny tosidra ambony ao Eoropa mponina. Izany no porofo fa somary mahery fanjifàna toaka mety hahatonga ny tosidra ambony.
Ireo hita nitarika ho mahaliana hevitra: angamba, ary koa ny manamafy causal fikambanana efa fantatsika isika (toy ny fifohana sigara sy ny kanseran'ny havokavoka), dia mety hanampy antsika hamantatra ireo anton-javatra hafa mety causal ho aretina. Ohatra, ny fifohana sigara ihany koa Variant fantatra tao vao haingana ny aretin-tsaina GWAS - mety izany midika fa ny fifohana sigara dia causal mety antony fa ny aretina? mety, na dia mbola fitiliana ho ilaina mba hanamarinana izany, toy ny mbola azo atao izany dia azo zaraina fototarazo maritrano.
Amin'izao fotoana izao, ny tena famerana amin'ny fandikana GWAS amin'izany fomba izany dia ny hoe, tsy dia betsaka ny modifiable predictors fototarazo mety mahatonga fantatra. Fa izany no miova. Ohatra, dia fantatsika fa ny fampiasana rongony, fara fahakeliny, amin'ny ampahany dia heritable, kevitra misy fototarazo singa, nefa mbola tsy nisy variants efa fantatra. Rehefa manomboka variants ireo rehefa hita, ny fampahalalana ao GWAS mba hiresaka amintsika.
Ary nahoana izany no ilaina? tsara, it’s much easier to help people change their lifestyle behaviours than it is to alter their genetics!
28791	5 toaka, Article, Haiaina, fototarazo, Science, Science bilaogy Network, Sifting the evidence, Smoking, Suzi Gage
← Samsung Galaxy S7 sy S7 Edge tantera-drano finday Farany indrindra Insane Teknolojia sy ny famoronana [VIDEO] →